उपनिर्वाचन : ५० स्थानको नतिजा, कहाँ कसले जिते ? « Drishti News
उपनिर्वाचन : ५० स्थानको नतिजा, कहाँ कसले जिते ?
उपनिर्वाचन अन्र्तगत दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को २ बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमला खत्री (वली) लाई प्रमाण–पत्र प्रदान गरेपछि हार्दिक बधाई दिँदै मुख्य निर्वाचन अधिकृत रितेन्द्र थापा । तस्वीर : रासस
काठमाडौं, १७ मंसिर । शनिबार सम्पन्न ५२ पदका लागि भएको उपनिर्वाचनको प्राप्त पछिल्लो मत परिणामअनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अग्रस्थानमा छ । हालसम्म घोषित ५० स्थानको मतपरिणाममा नेकपाले २९ स्थानमा विजय हासिल गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस १२ स्थानसहित दोस्रो स्थानमा छ भने समाजवादी पार्टी नेपालले चार स्थानमा विजय प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका उम्मेदवार तीन स्थानमा विजयी भएका छन् भने एक स्वतन्त्र उम्मेदवार वडाध्यक्षमा निर्वा्चित भएका छन् ।
नेकपाले एक प्रतिनिधिसभा सदस्य, एक प्रदेशसभा सदस्य, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र २३ वडाध्यक्ष पद जितेको छ । काँग्रेसले भने एक प्रदेशसभा सदस्य र ११ वडाध्यक्षमा विजय हासिल गरेको हो । समाजवादीका उम्मेदवार चार र राजपाका उम्मेदवारले तीन वडाध्यक्षको नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका छन् ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारले बागलुङमा प्रदेशसभा सदस्य जितेका छन् भने एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले वडाध्यक्षमा विजय हासिल गरेको निर्वाचन आयोगबाट थाहा भएको छ ।